Qaabkii Ay Kooxda Arsenal U Soo Bandhigay Saxiixeeda Cusub Ee Stephan Lichtsteiner | Balanbaalis.Com	Qaabkii Ay Kooxda Arsenal U Soo Bandhigay Saxiixeeda Cusub Ee Stephan Lichtsteiner – Balanbaalis.Com
Saxiixa cusub ee Arsenal Stephan Lichtsteiner ayaa ka hadlayey hogaaminta uu kooxda keenayo, iyo sidoo kale hamiyadiisa xilli ciyaareedka soo aadan.
Imaanshiyaha Lichtsteiner ee Emirates ayaa la xaqiijiyay galabta, iyadoo kabtanka Swiss uu ku biirayo Juventus si xor ah. Taageerayaal badan oo Arsenal ah ayaa rajo ka qaba rajada uu ku guuleystay ee uu u keeni karo kooxda, iyagoo ku guuleystay todobo horyaal oo Serie A ah.
Waxaan rajeynayaa inaan keeno waxyaabo badan oo maskaxiyan ah, ayuu u sheegay www.arsenal.com. Waa wax yar oo ka mid ah mashruucii aan sameeyay todobo sano ka hor Juventus.
Juventus sidoo kale labo jeer uma aysan helin Champions League. Waxaan rajeynayaa inaan soo bandhigi karo khibrad badan, badan oo maskaxeed iyo wadajir, kooxdeyda, dib ugu soo laabtaan heerka ugu sareeya ee Champions League.
Lichtsteiner, oo 34 sano jir ah, ka dibna wuxuu qeexay nooca hogaanka uu ku jiro qolka labiska iyo garoonka dhexdiisa.
Ugu danbeyntii ma ahan mid aad muhiim u ah in la hadlo wax badan.
Waxyaabaha muhimka ah waa waxa aad sameyneyso garoonka, inaad tusaale ahaan u tahay ciyaartoyda da’da yar, ciyaartoyda da’da ah, in qof walba uu og yahay in wiilkan naga caawin doono. Sidoo kale aniga oo kale, waxaan u baahanahay inaan ogaado in qof kasta iga caawiyo.
Tani waa ruuxa kooxda ah ee aan u baahanahay inaan heysano, si aan u hubinno kalsoonida inaan midkeeno si aan u caawino.
Arsenal ayaa rajeyneysa in Lichtsteiner – saxiixa ugu horeeya ee tababaraha cusub ee Unai Emery – ay ka caawin karto inay ku laabtaan Premier League afaraad.
Waxaa jira mashruuc, ayuu yiri Lichtsteiner. Waxaa jira mashruuc uu ku soo laabanayo Champions League. Waxaan qabaa inay adag tahay inaan aragno koox sida Arsenal ah oo aan ka ciyaareyn Champions League. Haddii aad aragto ciyaartoyda, hadii aad aragto naadiga, garoonkeeda … waa mashruuca, fursada weyn ee dib ugu soo laabashada heerka ugu sareeya.
Lichsteiner ayaa xiran doona lambarka 12 ee Gunners.